फ्रान्स र युकेमा दैनिक कोरोना संक्रमित दुई लाख बढी, अन्य एक दर्जन देशको अवस्था के छ ? :: NepalPlus
फ्रान्स र युकेमा दैनिक कोरोना संक्रमित दुई लाख बढी, अन्य एक दर्जन देशको अवस्था के छ ?
नेपालप्लस संवाददाता२०७८ पुष २१ गते १५:५४
युरोपमा फेरिपनि कोरोना संक्रमितहरुको संख्या नाटकिय रुपमा बढीरहेको छ । संयुक्तराज्य बेलायत र फ्रान्समा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या दुई लाख नाघेको छ ।
पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको कोरोना भाईरसको ओमिक्रोन संस्करण युरोपमा फैलिएर धेरै राष्ट्रहरूले नयाँ दैनिक संक्रमितको संख्या रिपोर्ट गरिरहेका छन् ।
केही देशहरूले खोप नगरिएकाहरूलाई लक्षित गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने, सिमा तोक्ने लगायतका कदम चालेका छन् । वालवालिकाहरूलाई खोप लगाउनका लागि कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । तैपनि ओमिक्रोनको संक्राण बढेको बढ्यै छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले मंगलबार (जनवरी ४) मा देशमा ओमिक्रोन तरंगलाई अझै फैलिनसक्ने बताएका थिए । बेलायतले मंगलवार दुई लाख १८ हजार नयाँ कोविड-१९ संक्रमणहरू रिपोर्ट गरेको छ ।
“हामीसँग हाम्रो देशलाई फेरि एक पटक लकडाउन नगरिकनै यो ओमिक्रोन लहरलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने मौका छ जोनसनले भने “ओमिक्रोन अन्य भेरियन्टहरू भन्दा हल्का छ । र यसले सघन हेरचाहको आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूको संख्या भने बढाएको छैन ।”
जोनसनले केही सेवाहरू कर्मचारी अभावले अवरुद्ध भएकोले आगामी हप्ताहरू चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन् । उनले प्रत्येक दिन एक लाख महत्वपूर्ण कामदारहरूको स्वास्थ्य प्रत्येक दिन परीक्षणकालागि उपलब्ध हुने उल्लेख समेत गरेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई ‘प्लान बी’ प्रतिबन्धहरू यथावत राख्न, जस्तै सम्भव भएसम्म घरबाट काम गर्न सिफारिस गर्ने बताएका छन् ।
यसैबिच स्कटल्याण्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डले मनोरञ्जन गतिविधि, पब र क्याफेहरूमा बाहिर जान थप प्रतिबन्धहरू लगाएका छन् । यसमा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने नियमहरूको विस्तार गरिएको छ । भेटघाट र भेलाहरूको आकारमा थप सीमाहरू समावेश गरिएको छ ।
जर्मनीले बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र सात अन्य दक्षिणी अफ्रिकी देशहरूबाट यात्रामा प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारेको छ जुन नयाँ ओमिक्रोन भेरियन्टको फैलावट रोक्न लगाइएको थियो ।
कोरोना संक्रमण धेरै भएका देशहरुलाई यात्रा प्रतिबन्धहरूको साथसाथै जर्मनीको “उच्च जोखिम क्षेत्रहरू” को सूचीमा थपिने भएको छ । कोविड-१९ विरुद्ध खोप नलगाएका वा कोरोना लागेर निको भएका व्यक्तिहरूले पाँच दिन पछि भाइरस परिक्षण गर्दा नेगेटिभ नदेखिएमा १० दिनको लागि सेल्फ-आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ ।
ओमिक्रोनको कारणले कोविड-१९ को ठूलो पाँचौं लहर सामना गरेकोले जर्मनीले निजी जमघटहरू दस व्यक्तिहरूमा सीमित गरेको थियो । नयाँ वर्ष अगाडि नाइटक्लबहरू बन्द गरेको थियो ।
फूटबल खेल जस्ता ठूला कार्यक्रम दर्शकबिनानै खेल्नुपर्ने बनाइएको छ । यो नियम डिसेवर २८ देखि लागु गरिएको हो ।
खोप नलगाएकाहरुलाई बिभिन्न प्रतिबन्धहरु लगाइएको छ । अत्यावस्यक सामाग्रिका बाहेक अन्य पसलमा प्रवेश गर्न खोप प्रामाण वा कोरोन अनिको भैसकेको प्रमाण देखाउनुपर्छ । आइतवारसम्म बेलायती पर्यटकहरूलाई जर्मनीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
कोरोना परिक्षण गर्दा सकारात्मक देखिएमा पूर्ण खोप लगाइएका व्यक्तिहरूलाई अब १० दिनबाट घटाएर सात दिनको लागि सेल्फ-आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बनाइएको छ । यदि व्यक्तिको परीक्षण नेगेटिभ आएमा सेल्फ आइसोलेसन घटाएर पाँच दिन बनाउन सकिन्छ । यसैबीच, सकारात्मक परीक्षण गर्ने व्यक्तिहरूले पूर्ण रूपमा खोप लगाइएका ब्यक्तिहरुसित सम्पर्क गरेका छन् भने तिनिहरूलाई अब सेल्फ-आइसोलेसनमा बस्न आवश्यक पर्दैन ।
छ वर्षदेखि १२ वर्ष सम्मका बच्चाहरूले खुला ठाउँहरूमा समेत मास्क लगाउनु पर्छ । किनभने अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रोन भेरियन्टका नयाँ केसहरू लगातार चौथो दिनमा दुई लाख भन्दा अझै बढेका छन् ।
प्रधानमन्त्री जँ कास्टेक्सले बुस्टर डोज अब अघिल्ला खोप लगाएको तिन महिनामै लगाउन सकिने बनाएका छन् । यस अघि पाँच महिना थियो ।
भेलाहरू पनि घर वा हलभित्र (ईन्डोर) मा २,००० मानिस र बाहिर ५,००० मा सीमित गरिएको छ । कास्टेक्सले थप उपायहरूबारे छलफल गर्न सरकारी बैठक डाकेको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् । किनकि फ्रान्समा कोरोनाका संक्रमितहरू र अस्पताल भर्नाहरूको संख्या ज्यादै बढेको छ ।
क्याफे र बारहरूआ जनवरी ३ देखि बस्नेहरुको लागि मात्रै खुला गर्ने अनुमति छ । यो तिन महिनासम्म कायम रहने छ ।
“हामीले स्थायी कन्सर्ट, सांस्क्रितिक साँझलाई निषेध गर्दैछौं । सबै सिनेमाघर, थिएटर, खेलकुद सुविधा र सार्वजनिक यातायात, लामो दूरीको यात्रामा खाना र पेय पदार्थको उपभोग निषेध गरिनेछ” फ्रान्सेली प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।
संभव भएसम्म हप्तामा कम्तिमा तिन दिन कार्यालयको काम घरबाटै (टेलेवर्किङ) गर्न निर्देशन दिईएको छ ।
इटालीमा बुधबार (डिसेम्बर २९) कोविड-१९ संक्रमणको रेकर्ड ९८ हजार ३० जनामा पुगेको छ जुन एकै दिन २५ प्रतिशतले बढेको हो ।
संक्रमित व्यक्तिहरूसँग नजिकको सम्पर्कमा आएपछि २० लाखभन्दा बढी मानिसलाई आइसोलेसनमा बस्न बाध्य पार्ने सरकारले सोचेको थियो । सरकारले खोप लगाइएका व्यक्तिहरूको लागि क्वारेन्टाइन घटाउने विचार गरिरहेको छ ।
ईटालीले डिसेम्बर २३ मा आफ्नो प्रतिबन्धहरू थप कडा गर्‍यो । खोप नगरिएका मानिसहरूलाई सार्वजनिक स्थानहरूबाट रोक्यो । बाहिर मास्क लगाउनुपर्ने बनायो । बढी सुरक्षात्मक मानिएको एफएफपि२ मास्क सिनेमा, थिएटर र स्टेडियम र सार्वजनिक यातायातमा मात्र लगाउने बनाइएको छ ।
नयाँ वर्ष लगायत अन्य खुला ठाउँका उत्सवहरु प्रतिबन्धित गरिएको छ । नाइटक्लबहरू जनवरी ३१ सम्म बन्द हुनेछन् ।
देशले पहिले नै खोप नगरिएका ईयु नागरिकहरूलाई देशमा प्रवेश गर्दा पाँच दिनको लागि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बनाएको छ । ईयु देशहरूबाट खोप लगाइएका आगन्तुकहरूले आगमनको २४ घण्टा भित्र नकारात्मक परीक्षण गर्नुपर्छ ।
इटाली सरकारले ६ डिसेम्बरमा ‘सुपर हेल्थ पास’ जारी गरेर खोप नलिनेहरूलाई नयाँ नियमहरू लागू गर्‍यो ।
अस्पतालमा भर्ना भएका मध्ये ७१ प्रतिशतलाई खोप लगाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
खोप लगाएको वा कोविड-१९ बाट निको भइसकेका व्यक्तिहरूले मात्र भित्र (इनडोर) रेस्टुरेन्टहरूमा खाना खान, चलचित्र हेर्न वा खेलकुद कार्यक्रमहरूमा भाग लिन सक्छन् । यसले अब विद्यालयका कर्मचारी, कानून प्रवर्तन, सेना र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने जो कोहीलाई खोप लगाउनुपर्ने बनाएको छ ।
चार दिनमा पहिलो पटक महामारीको तथ्याङ्कहरू अद्यावधिक गर्दै स्वास्थ्य अधिकारीहरूले सोमबार (२७ डिसेम्बर) मा दुई लाख १४ हजार छ सय १९ नयाँ केसहरू रिपोर्ट गरे । १४-दिनको राष्ट्रिय घटनाहरु हेर्दा प्रति एक लाख बासिन्दामा एक हजार दुई सय ६ जना संक्रमित भएको पाइयो ।
राजधानी म्याड्रिडले फेरि एक पटक बाहिर मास्क लगाउन अनिवार्य बनाएको छ । स्पेनका प्रधानमन्त्रीले फेरि स्वास्थ्य कानून पारित गर्ने तयारि गरेका छन् ।
स्पेनमा हाल सबैभन्दा बढी ओमिक्रोनकै संक्रमित छन् ।
प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले केहि क्षेत्रहरूमा खोपहरू बढाउन मद्दत गर्न सशस्त्र बलहरू खटाउने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । सान्चेजले ६०-६९ उमेर समूहका ८० प्रतिशतलाई अर्को साताको अन्त्यसम्ममा अन्य लक्ष्यहरू सहित बुस्टर शटहरू लगाउने लक्ष्य राखेको बताए ।
व्यावसायिक प्रयोगको लागि कोविड-१९ परीक्षणहरू अस्थायी रूपमा फार्मेसीहरूमा बिक्रीमा राखिनेछ । परीक्षणहरूको कमीको रिपोर्ट आएपछि फार्मेसीहरुमा राख्न लागिएको हो ।
स्पेनका धेरै क्षेत्रहरूले क्रिसमस र नयाँ वर्ष अगाडि खोप नगरिएकाहरूका लागि कडा नियमहरू प्रस्तुत गरेका छन् । बार र रेस्टुरेन्टहरू जस्ता सार्वजनिक स्थानहरूमा प्रवेश गर्न कोविड-१९ प्रमाणपत्रको प्रयोग विस्तार गरिएको छ । धेरैले भर्खरै लागू गरिएको स्वास्थ्य पासको विरोध गरेका छन् ।
स्पेनमा जनसंख्याको ८० प्रतिशत भन्दा बढीले पहिले नै खोप लगाएका छन् । तर ओमिक्रोन भेरियन्टको डरले खोप अभियान फेरि सुरु गरिएको छ।
मङ्गलबार (२८ डिसेम्बर) सांस्कृतिक क्षेत्रमा नयाँ प्रतिबन्धहरू निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सल्लाहकार निकायले आलोचना गरेको थियो । भोलिपल्ट सरकारले थिएटर, सिनेमाघर, कन्सर्ट हल र कला केन्द्रहरू खुला रहन अनुमति दिँदै आफ्नो निर्णय फिर्ता लिइरहेको बताएको थियो ।
आइतवार लागू भएको अल्पकालीन प्रतिबन्धहरू अन्तर्गत इनडोर स्थानहरूलाई उनीहरूको ढोका बन्द गर्न आदेश दिइएको थियो । कतिपय खुलेर विरोधमा बसेका थिए । वैज्ञानिक समितिले सरकारलाई यस्ता ठाउँमा जाँदा जनस्वास्थ्यमा थप जोखिम नहुने सल्लाह दिए पनि उक्त आदेश आएको हो ।
बेल्जियमले नयाँ प्रतिबन्धहरू लागू गरेपछि आइतबार (२६ डिसेम्बर) का दिन प्रदर्शनकारीहरू भेला भएका थिए । संग्रहालयहरू, पुस्तकालयहरू र फिटनेस केन्द्रहरू भने खुला रहन अनुमति दिइएको थियो ।
बेल्जियम सरकारले पनि मानिसहरूलाई बिदा जानु अघि परीक्षण गर्न आग्रह गरेको छ । पछिल्लो केहि दिनदेखि बेल्जियममा संक्रमण घट्दै गएको छ । तर नयाँ ओमिक्रोन संस्करणले डिसेम्बर १९ मा देशमा नयाँ केसहरूको संख्या २७ प्रतिशत थियो ।
पोर्चुगलले क्रिसमस र नयाँ वर्षमा नयाँ प्रतिबन्धहरूको घोषणा गरेको छ । घरबाट काम गर्नु अनिवार्य हुनेछ र बार र नाइटक्लबहरू शनिबारदेखि बन्द छन् ।
मानिसहरूले कम्तिमा ९ जनवरीसम्म सिनेमा, थिएटर, खेलकुद कार्यक्रमहरू, विवाह र अन्य धार्मिक समारोहमा पहुँच गर्न भाइरसको लागि नकारात्मक परीक्षणको प्रमाण आवश्यक छ । क्रिसमस र नयाँ वर्षमा मानिसहरूलाई रेस्टुरेन्टहरू र सार्वजनिक उत्सवहरूमा पहुँच गर्न नकारात्मक परीक्षण परिणाम अनिवार्य गरिएको छ ।
नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा सडकमा दस जना भन्दा बढी मानिस भेला हुन नपाइने बनाइयो । बाहिर रक्सी पिउन निषेध गरिएको छ ।
पोर्चुगलमा उच्च खोप दरको बावजुद यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो । लगभग ८७ प्रतिशत जनसंख्याले पूर्ण रूपमा भाइरस विरुद्ध खोप लगाएको छ ।
पोर्चुगलले डिसेम्बर १ मा संक्रमणमा नयाँ वृद्धि भएपछि कडा महामारी प्रतिबन्धहरू पुन: लागू गर्‍यो । फेस मास्क एक पटक फेरि अनिवार्य भयो र देशले आफ्नो सिमानाको नियन्त्रण कडा गर्यो ।
रेस्टुरेन्ट, सिनेमाघर र होटलहरूमा जान खोप वा कोविड-१९ बाट निको भएको प्रमाणित गर्ने डिजिटल प्रमाणपत्र आवश्यक बनाएको छ ।
२५ डिसेम्बरमा पोर्चुगलको स्वास्थ्य महानिर्देशनालयले ओमिक्रोन सबैभन्दा प्रभावशाली भेरियन्ट भएको र देशका सबै कोविड-१९ संक्रमण मध्ये दुई तिहाइ बनेको घोषणा गर्‍यो ।
पोर्चुगलले डिसेम्बर ३१ मा दैनिक कोविड-१९ संक्रमितहरूको नयाँ रेकर्ड कायम गर्‍यो । आधिकारिक रूपमा लगभग ३१ हजार नयाँ संक्रमणहरू रिपोर्ट गरियो । यो कोरोना उच्चस्तरमा लगातार बढेको चौथो कीर्तिमानी दिन थियो ।
नेदरल्याण्ड्सले ओमिक्रोन भेरियन्टलाई रोक्न आइतबार (१९ डिसेम्बर) देखि राष्ट्रव्यापी तालाबन्दी गरेको छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री मार्क रुटेले नयाँ प्रतिबन्धहरूबारे छलफल गर्न आफ्नो सरकारसँगको बैठक यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनले थपे “यो कदम अपरिहार्य थियो । किनभने ओमिक्रोन भेरियन्टको कारणले गर्दा पाँचौं लहरले हामीलाई असर गरिरहेको छ “।
नेदरल्याण्डमा भर्खरको कोरोना भाइरस वृद्धिमा साना बच्चाहरूमा संक्रमण सबैभन्दा तीव्र वृद्धि भएको देखाएको छ ।
लकडाउनका उपायहरू गत महिना पेश गरिएको थियो । बार, रेस्टुरेन्ट र अन्य सार्वजनिक भेला हुने ठाउँहरू जस्तै थिएटर र सिनेमाहरू नोभेम्बर २८ देखि साँझ ५ बजे ढोका बन्द गर्नुपर्ने बनाइएको छ । छुट्टीको समयभरि यहि नियम लागु गरिएको छ ।
खेलकुदका ठूला कार्यक्रममा दर्शकलाई अनुमति रोक्का गरिएको छ र साना तहका (एम्याचुर) कार्यक्रम अपरान्ह पाँच बजेदेखि विहान पाँच बजेसम्म निषेध गरिएको छ ।
फिनल्याण्डले डिसेम्बर २८ मङ्गलबारदेखि आफ्नो सिमानामा आन्तरिक सिमाना नियन्त्रण पुन: सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णय युरोपमा आफ्नो प्रकारको पहिलो हो । १६ जनवरी २०२२ सम्म यो नियम लागू रहने छ ।
नियमले सबै शेन्जेन (ईयुको एकल भिसा पद्दती भएका मुलुक) राज्यहरूलाई पनि असर गर्छ । सम्भावित यात्रीहरूलाई उनीहरूको यात्रा अघि कोरोना स्वास्थ्य नियमका आवश्यकताहरू जाँच गर्न आग्रह गरिएको छ ।
२७ डिसेम्बर देखि डेनमार्क प्रवेश गर्ने सबै विदेशी र गैर डेनमार्क निवासीहरूलाई खोप लगाए पनि नकारात्मक कोविड परीक्षण आवश्यक बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले घोषणा गरेको छ । यो नियम २७ डिसेम्बर देखि कम्तिमा १७ जनवरी २०२२ सम्म लागू हुनेछ ।
अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रोन भेरियन्टद्वारा संचालित कोविड-१९ संक्रमणको रेकर्ड वृद्धिको बीचमा डेनमार्कले थिएटरहरू, सिनेमाघरहरू, कन्सर्ट हलहरू, मनोरञ्जन पार्कहरू, संग्रहालयहरू र कला ग्यालरीहरू बन्द गरेको छ ।
स्टोर र रेस्टुरेन्टहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको संख्या सीमित गर्नुपर्छ । र रेस्टुरेन्टहरू साँझ ११ बजे भित्रै बन्द गर्नुपर्छ ।
विश्वमा प्रति व्यक्ति कोभिड-१९ सर्वाधिक सङ्ख्या भएको देश हो डेनमार्क । यसले बुधबार (डिसेम्बर २९) पछिल्लो २४ घण्टामा २३ हजार दुई सय २८ जनामा ​​सङ्क्रमण पुष्टि भएको आफ्नो रेकर्ड तोडेको छ ।
डेनमार्कमा कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या डिसेम्बरको शुरुमा तीव्र रूपमा बढ्न थालेको थियो । तर महिनाको अन्त्यमा यो गति कम भएको जस्तो देखिन्थ्यो । तर स्वास्थ्य अधिकारीहरूले त्यसपछि संक्रमणको संख्या नाटकीय रूपमा फेरि बढ्न थालेको बताएका छन् ।
सरकारले पहिले मानिसहरूलाई घरबाट काम गर्न सिफारिस गरेको थियो । ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरू उभिएको कन्सर्टमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । र मानिसहरूलाई बसेर खाना खाने ठाउँहरूमा फेस मास्क लगाउन आदेश दिएको छ ।
ओमिक्रोन अब डेनमार्कमा प्रमुख संस्करण बनेको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
स्वास्थ्य अधिकारीहरूले शुक्रबार (३१ डिसेम्बर) मा क्यान्टोनहरूले क्वारेन्टाइनलाई अघिल्लो दसबाट सात दिनमा घटाउन सक्ने घोषणा गरेका थिए । एउटै घरमा बस्ने वा सकारात्मक परीक्षण गरेको व्यक्तिसँग घनिष्ठ सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूमा यसो लागु गर्न सक्ने बताएका छन् ।
स्विजरल्याण्डले खोप नलगाएकाहरूका लागि सार्वजनिक जीवनमा पहिले नै प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
कोविड-१९ खोप लगाइएका वा निको भएका व्यक्तिहरूले मात्र रेस्टुरेन्ट, सांस्कृतिक स्थलहरू वा अन्य इनडोर कार्यक्रमहरू पहुँच गर्न सक्षम हुन्छन् । निजी पारिवारिक जमघटहरू दस व्यक्तिहरूमा सीमित हुनुपर्छ ।
स्वीस मतदाताहरूले २८ नोभेम्बरमा भएको जनमत संग्रहमा तथाकथित कोविड-१९ कानून लाई स्पष्ट अन्तरले अनुमोदन गरेका थिए ।
अस्ट्रियाको सरकारले देशको तुलनात्मक रूपमा कम खोप भएकोमा निराशा ब्यक्त गरेको छ । फेब्रुअरीदेखि लागू हुनेगरि सबै वयस्कहरूको लागि कोविड खोप अनिवार्य बनाउने योजना बनाएको छ ।
अस्ट्रियाले डिसेम्बर १२ मा “२जी” पास भएका मानिसहरूका लागि आफ्नो तालाबन्दी हटायो जसको मतलब तिनीहरू कोविड-१९ विरुद्ध खोप लगाइएका वा हालै बिरामीबाट निको भएकामा पर्छन् ।
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बिना मानिसहरूलाई काममा जान वा अन्य आवश्यक उद्देश्यका लागि मात्र आफ्नो घर छोड्न अनुमति दिइन्छ ।
त्यहाँ रेस्टुरेन्टहरूको लागि १० बजे कर्फ्यू छ र सार्वजनिक यातायात र भित्री ठाउँहरूमा बढी सुरक्षित मानिएको एफएफपि२ मास्क अनिवार्य छ ।
अस्ट्रियाले आफ्नो देशमा प्रवेश नियम कडा बनाएको छ । डिसेम्बर २५ सम्म, यूके, नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क र नर्वेबाट आइपुगेका १२ वर्ष भन्दा माथिका मानिसहरूले तेस्रो खोपको डोज लिएको हुनुपर्छ । र ४८ घण्टा भन्दा नयाँ नेगेटिभ कोविड परीक्षण प्रस्तुत गरेको हुनुपर्छ ।
पोल्याण्डले स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, प्रहरी, सेना र अग्निनियन्त्रकहरूका लागि कोभिड-१९ खोप अनिवार्य बनाउने घोषणा गएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री एडम निडजिल्सकीले मंगलबार मार्च १ पछि यी क्षेत्रहरूमा काम गर्नका लागि खोप एक शर्त हुने घोषणा गरेका छन् ।
नाइटक्लबहरू बन्द हुनेछन् । बढ्दो संक्रमणको बीचमा डिसेम्बर १५ देखि रेस्टुरेन्ट र थिएटरहरू कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । सार्वजनिक यातायातलाई क्षमताको ७५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।
सरकारले बुधबार (डिसेम्बर २९) का दिन ७९४ जना कोभिडका कारण मृत्यु भएको घोषणा गरेको छ । यो भाइरसको चौथो लहरमा सबैभन्दा उच्च हो । जनसंख्याको तीन चौथाई भन्दा बढीले यहाँ खोप नलगाएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।